Hataon'i Microsoft fongana ny Remix 3D nanomboka ny Janoary 2020 | Famoronana an-tserasera
ny banky sary sy karazana rakitra rehetra manana totohondry tsara ry zareo. Saingy toa tsy dia mafonja loatra izany ho an'ny Remix 3D, tranonkala iray ahafahana mizara ny maodely 3D ary amin'ny taona 2020 dia hanjavona izany hoy i Microsoft, tompon'ny tranonkala.
Avy amin'ny hafatra iray izay mety ho hita rehefa miditra ao amin'ny tranonkalany ianao dia mampitandrina i Remix 3D fa ny serivisy Tsy hisy intsony hatramin'ny Janoary 2020. Tsy hanjavona fotsiny izy io, fa ny angon-drakitra ampiasain'ny mpampiasa rehetra kosa dia handalo ny alahelon'ny sasany izay nahita ity tranonkala ity ho iray amin'ireo fototr'izy ireo amin'ny fiainany 3D.
Raha atao teny hafa, miresaka momba ny inona isika modely 3D namboarina rehetra avy amin'ireo mpampiasa ary koa ny angon-drakitra misy azy ireo, hanjavona tsy ho eo amin'ny rafitra intsony izy ireo ka tsy azontsika atao ny misintona azy ireo na mila kopian'izy ireo izahay. Mazava ho azy, tsy midika izany fa afaka mampita ireo maodely ireo amin'ny serivisy rahona isika mba hahafahantsika mizara azy ireo.
Raha ny marina dia i Microsoft mihitsy no manoro hevitra ny hanaovana izany mba tsy hahavery ireo maodely nalefanay tamin'io serivisy antsoina hoe Remix 3D. Ny mahatsikaiky amin'ity serivisy ity dia ny taona 2017 vao tonga ho fanavaozana ny Windows 10.
Izany hoe, serivisy iray izay nivoaka tamin'ny mitovy amin'ny Paint 3D miaraka aminy fanavaozana ny famoronana. Ary tokony ho fantatrao fa manomboka amin'ny volana Aogositra, manokana amin'ny 7, tsy misy maodely novokarina tamin'ny 3D intsony azo nakarina tao amin'ilay serivisy. Raha lazaina amin'ny teny hafa, mihidy ny varavarana ka manana andiam-bolana handefasana ireo rehetra izay nampakarintsika tao amin'ny serivisy.
Ary na dia aza raisina ela koa ny serivisy an-tserasera, tsy fahita firy amin'ny vondron'olona misy modely modely 3D no hanjavona miaraka amin'izay rehetra mifanaraka aminy. Aza adino ity lesona momba ny fitaovana 3D an'ny Photoshop ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Remix 3D dia hesorin'i Microsoft amin'ny farany